မွမွလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းတဲ့ ထမင်းခြောက်ကြော်လုပ်နည်း -
မွမွလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းတဲ့ ထမင်းခြောက်ကြော်လုပ်နည်း
Posted on November 27, 2018 November 27, 2018 Author Khaine Zar Lin	Comment(0)
အမယ်.. ထမင်းခြောက်ကြော်တောင်မှ အမျိုးအစား ခွဲသေးသတဲ့..
အိမ်မှာစားလို့မကုန်တဲ့ ထမင်းကြမ်းတွေကို လွှင့်ပစ်ကြလား? မပစ်နဲ့နော်.. နှမြောစရာကြီး.. အဲဒီ ထမင်းကြမ်းလေးတွေကနေ မွမွလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းတဲ့ ထမင်းခြောက်ကြော် လုပ်လို့ရတယ်လို့..
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတော့ကာ ရှေးရိုးအစဉ်အလာမပြတ် ထမင်းခြောက်ကြော် ကြော်နည်းကတော့ တကယ်ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူပေါ့နော်… အိမ်မှာကျန်တဲ့ထမင်းလေးတွေ နေလှန်းပြီးကြော်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပိုပြီးစားကောင်းတဲ့ကြော်နည်းလေးရှိသေးတယ် သိလား.. ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ထိုင်းရိုးရာနည်းလေးပါ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လှလှပပလေးနဲ့ စားချင်စရာလေးရယ်။
ထမင်းစေ့လုံးဝမပါတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်ပါးပါး ထမင်းခြောက်ကြော် ပုံစံ၊
ကောက်ညှင်းငချိတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကောက်ညှင်းခွက်ကြော်ဆိုပြီး ပုံစံ (၃) မျိုး ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
၁။ ထမင်းအစေ့လုံးဝမပါတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်ပါးပါးထမင်းခြောက်ကြော်နည်း
အရင်ဆုံး အခင်းသန့်သန့် (Silicon အခင်း) ပေါ်မှာ ပလတ်စတစ်အပါးလေး ထပ်ခင်းပြီး ထမင်းတွေကို ဖြန့်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အပေါ်ကနေ နောက်ထပ် ပလတ်စတစ်အပါးလေး ထပ်ခင်းပြီး ဒလှိမ့်တုံးနဲ့ ပါးပါးလေးဖြစ် သွားအောင်လှိမ့်ပေးပါ။ ထမင်းတွေကို လေးထောင့်ပုံစံပြား ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး ၁ လက်မခွဲ ပတ်လည်အကွက်လေးတွေဖြစ်အောင် အရာပေးပါ။ တချို့ကတော့ ထမင်းတွေကို Blender ထဲ ထည့်ကြိတ်ပြီး အကုန်ကြေသွားပြီဆိုတော့မှ အခင်းပေါ် ဖြန့်ချတာမျိုးလုပ်ပါတယ်။
နေပူထဲမှာလှန်းပါ။ လှန်းတဲ့အခါမှာလည်း တစ်ဖက်ကို အရင်ခြောက်အောင် ခဏလှန်း၊ ခြောက်ပြီဆိုတော့မှ နောက်တစ်ဖက်ကို လှန်ပြီး လုံးဝခြောက်သွားအောင် ဆက်လှန်းပါ။ လုံးဝခြောက်သွားရင်တော့ ဆီပူပူထဲမှာ နှစ်ပြီး ကြော်လိုက်ပါ။
၂။ ထမင်းအစေ့လိုက်ပါတဲ့ ထမင်းခြောက်ကြော်လုပ်နည်း
ထမင်းကြမ်းခဲတွေကို ပုံစံခွက်အ၀ိုင်းလေးထဲထည့်ပြီး ပုံသွင်းပါ။ ပါးပါးလေးဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ပြီးရင်တော့ ၂ ဖက်လုံး ခြောက်သွားအောင် နေလှန်းထားလိုက်ပါ။
လုံးဝခြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ ကြော်စားလို့ရပါပြီ။ (အတော်ခက်နေဦးမယ် 😛 )
Related Article >>> အာလူးထမင်းသုတ် ပြုလုပ်နည်း
ကောက်ညှင်းငချိပ် ၃ ချိုး ကောက်ညှင်းအဖြူ ၁ ချိုးရောပြီးချက်လိုက်ပါ။ ငချိပ်တစ်မျိုးတည်းဆို မာပြီး စားမကောင်းပါဘူးနော်။ ပြီးရင်တော့ ပထမနည်းထဲကလိုပဲ ဒလှိမ့်တုံးနဲ့ လှိမ့်ပုံသွင်းပြီး နေလှန်းလိုက်ပါ။ ၂ ဖက်လုံးခြောက်ရင်တော့ ကြော်စားလို့ရပါပြီ။
ကဲ ဆားလေးနဲ့တို့ပြီး အဆိမ့်အရသာလေးပဲ စားစား၊ သကြားလေးတို့ပြီး အချိုလေးပဲစားစားအရမ်းအရသာရှိပါတယ်။ယောင်းတို့ အားလုံးပဲ စားကောင်းကြပါစေနော်။
အမယျ.. ထမငျးခွောကျကွျောတောငျမှ အမြိုးအစား ခှဲသေးသတဲ့..
အိမျမှာစားလို့မကုနျတဲ့ ထမငျးကွမျးတှကေို လှငျ့ပဈကွလား? မပဈနဲ့နျော.. နှမွောစရာကွီး.. အဲဒီ ထမငျးကွမျးလေးတှကေနေ မှမှလေးနဲ့ စားလို့ကောငျးတဲ့ ထမငျးခွောကျကွျော လုပျလို့ရတယျလို့..
ဘယျလိုလုပျမလဲ ဆိုတော့ကာ ရှေးရိုးအစဉျအလာမပွတျ ထမငျးခွောကျကွျော ကွျောနညျးကတော့ တကယျကို ရိုးရှငျးလှယျကူပေါ့နျော… အိမျမှာကနျြတဲ့ထမငျးလေးတှေ နလှေနျးပွီးကွျောလိုကျရုံပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ပိုပွီးစားကောငျးတဲ့ကွျောနညျးလေးရှိသေးတယျ သိလား.. ဒီနညျးလမျးလေးကတော့ထိုငျးရိုးရာနညျးလေးပါ။ သပျသပျရပျရပျလှလှပပလေးနဲ့ စားခငျြစရာလေးရယျ။
ထမငျးစလေုံ့းဝမပါတဲ့ ကွှပျကွှပျပါးပါး ထမငျးခွောကျကွျော ပုံစံ၊
ကောကျညှငျးငခြိတျနဲ့လုပျထားတဲ့ ကောကျညှငျးခှကျကွျောဆိုပွီး ပုံစံ (၃) မြိုး ပွုလုပျလို့ရပါတယျ။
၁။ ထမငျးအစလေုံ့းဝမပါတဲ့ ကွှပျကွှပျပါးပါးထမငျးခွောကျကွျောနညျး
အရငျဆုံး အခငျးသနျ့သနျ့ (Silicon အခငျး) ပျေါမှာ ပလတျစတဈအပါးလေး ထပျခငျးပွီး ထမငျးတှကေို ဖွနျ့ထညျ့လိုကျပါ။ ပွီးရငျ အပျေါကနေ နောကျထပျ ပလတျစတဈအပါးလေး ထပျခငျးပွီး ဒလှိမျ့တုံးနဲ့ ပါးပါးလေးဖွဈ သှားအောငျလှိမျ့ပေးပါ။ ထမငျးတှကေို လေးထောငျ့ပုံစံပွား ဖွဈအောငျ လုပျပွီး ၁ လကျမခှဲ ပတျလညျအကှကျလေးတှဖွေဈအောငျ အရာပေးပါ။ တခြို့ကတော့ ထမငျးတှကေို Blender ထဲ ထညျ့ကွိတျပွီး အကုနျကွသှေားပွီဆိုတော့မှ အခငျးပျေါ ဖွနျ့ခတြာမြိုးလုပျပါတယျ။
နပေူထဲမှာလှနျးပါ။ လှနျးတဲ့အခါမှာလညျး တဈဖကျကို အရငျခွောကျအောငျ ခဏလှနျး၊ ခွောကျပွီဆိုတော့မှ နောကျတဈဖကျကို လှနျပွီး လုံးဝခွောကျသှားအောငျ ဆကျလှနျးပါ။ လုံးဝခွောကျသှားရငျတော့ ဆီပူပူထဲမှာ နှဈပွီး ကွျောလိုကျပါ။
၂။ ထမငျးအစလေို့ကျပါတဲ့ ထမငျးခွောကျကွျောလုပျနညျး
ထမငျးကွမျးခဲတှကေို ပုံစံခှကျအဝိုငျးလေးထဲထညျ့ပွီး ပုံသှငျးပါ။ ပါးပါးလေးဖွဈစရာမလိုပါဘူး။ ပွီးရငျတော့ ၂ ဖကျလုံး ခွောကျသှားအောငျ နလှေနျးထားလိုကျပါ။
လုံးဝခွောကျသှားပွီဆိုရငျတော့ ကွျောစားလို့ရပါပွီ။ (အတျောခကျနဦေးမယျ 😛 )
Related Article >>> အာလူးထမငျးသုတျ ပွုလုပျနညျး
ကောကျညှငျးငခြိပျ ၃ ခြိုး ကောကျညှငျးအဖွူ ၁ ခြိုးရောပွီးခကျြလိုကျပါ။ ငခြိပျတဈမြိုးတညျးဆို မာပွီး စားမကောငျးပါဘူးနျော။ ပွီးရငျတော့ ပထမနညျးထဲကလိုပဲ ဒလှိမျ့တုံးနဲ့ လှိမျ့ပုံသှငျးပွီး နလှေနျးလိုကျပါ။ ၂ ဖကျလုံးခွောကျရငျတော့ ကွျောစားလို့ရပါပွီ။
ကဲ ဆားလေးနဲ့တို့ပွီး အဆိမျ့အရသာလေးပဲ စားစား၊ သကွားလေးတို့ပွီး အခြိုလေးပဲစားစားအရမျးအရသာရှိပါတယျ။ယောငျးတို့ အားလုံးပဲ စားကောငျးကွပါစနေျော။
Tagged Crackers, Food, Make, Recipes, Rice
ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အဆင့်သုံးဆင့်နဲ့ ရိုးရာမုန့်လေးတွေ လုပ်စားမယ်…
Posted on May 31, 2018 July 25, 2018 Author Wathun